सुन्धारा कारागारका कैदी रामलखनको मृत्यु कसरी भयो जेलभित्र कि वीर अस्पतालमा ? भिडियो सहित
नयाँ संविधान जारी भएको विशेष दिन । संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस र दशैं–तिहारमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका २८९ कैदीले राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाए । रुपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिका–५ का रामलखन जैसवाल साढे ६ वर्षयता केन्द्रीय कारागारमा थिए । ज्यान मुद्दामा जेल परेका जैसवाललाई करिब डेढ वर्ष भैरहवा कारगारमा राखेर जेल प्रशासनले केन्द्रीय कारागारमा सरुवा गरेको थियो ।
संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैदीबन्दीलाई माफी दिएको निर्णय ६३ वर्षीय जैसवालले सायद थाहा पाएनन् । आफुसँगै बसेका कैदीलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धाराको बारभित्रबाट बिदाइको हात हल्लाउन नपाउँदै उनको प्राण गएको छ । ठूलो संख्यामा कैदीबन्दीलाई आममाफी दिने निर्णय भएको दिन जैसवालको मृत्यु भयो । परिवारले उनको मृत्युलाई ‘स्वभाविक’ मानेका छैनन् ।
परिबारका अनुसार ‘मृत्यु हैन, हत्या नै भएको हो ।’
मुलुकी ऐन–२०२० अनुसार उनी असोज २२ मा जेलमुक्त हुन पाउँथे । तर, मुलुकी अपराधसंहिताको दफा–३७ ले जन्मकैदको निर्णय भएकालाई ‘कैद छुट’ नदिने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चले ‘कैद छुट दिनु’ भनेपनि सो आदेश कार्यान्वयन भैसकेको छैन ।
‘कैद छुट’ को माग गर्दै जैसवालका परिवारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । सो मुद्दा फैसला भैसकेको छैन । सर्वोच्चको यसअघिको फैसला कार्यान्वयन भए जैसवाल १९ दिनपछि जेलको चौघेराबाट खुला आकाशमा निस्कन पाउँथे ।
मुलुकी ऐन–०२० अनुसार जम्मा १९ दिनको जेलजीवन बाँकी हुँदा कसरी उनी संसारबाटै बिदा भए ? उनको मृत्यु शंकास्पद छ । त्यसैले त परिवारले भनेका छन्, ‘घटनाको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्छ ।’
केन्द्रीय कारागार प्रशासनले उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको बताएको छ । हामीसँग कुरा गर्दै केन्द्रीय कारागारका जेलर लक्ष्मी बाँस्कोटाले भने, ‘दीर्घरोगी हुनुहुन्थ्यो, स्वास्थ्य समस्या भएपछि शनिवार राति पौने १० बजे अस्पताल लगेका थियौं, भर्ना गरेको करिब २५ मिनेटमा मृत्यु भयो ।’जेलबाट गएको ‘त्यो फोन’ शनिवार मध्यराती रामलखनकी छोरी रश्मिको मोबाइलमा एउटा फोन आयो । त्यो फोन केन्द्रीय कारागारबाट थियो । बुबाको मृत्युको खबर सुनेपछि रश्मि बेहोस भइन् । अस्पतालमा पुग्दा उनको शव छोपेर राखिएको थियो । रश्मिले हामीसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘त्यतिबेला बुबाको अनुहार मात्र देखाइदिनु भन्दा अस्पताल प्रशासनले मानेन् ।’ हजार बिन्ती गर्दापनि अस्पतालका कर्मचारीले परिवारलाई रामलखनको शव देखाएनन् ।
अन्ततः सोमबार दिउँसो रश्मिले अस्पताल प्रशासनलाई झुक्याउँदै बुबाको मुख हेर्न पाइन् । ‘जब बुबाको मुख देखें, आफै डराएँ,‘ जताततै रगत बगेको थियो, घाँटी र मुख माक्सले ढाकिएको थियो ।’शरीरमा पानीको फोका जताततै थियो । आँखा र मुखबाट रगत लतपतिएर अनुहार प्रष्ट देखिएन । रश्मिले भनिन्– ‘मेरो बुबालाई मारेर सडाएको हुनुपर्छ ।’
रश्मिले बुबाको शवको अवस्थाको भिडियो समेत खिचेकी छिन् भिडियो सामाजिक सन्जाल मा भाइरल भएको छ ।
मृत्युपछि पीसीआर जाँच गर्दा जैसवालको कोरोनाभाइरस पोजेटिभ रिपोर्ट आएको अस्पतालले जनाएको छ । कोरोना पोजेटिभ भएका व्यक्तिको शव आफन्तले दाहासंस्कार गर्न नपाउने कार्यविधिअनुसार कारागारले परिवारलाई शव दिएको छैन । कारागार प्रशासनले परिवारलाई खबर गर्दा पनि ‘तपाईंको मान्छेको कोरोनाको कारण ज्यान गएको’ बताएका थिए ।
मंगलबार बिहान नेपाली सेनाले जैसवालको शव अन्त्येष्टीको लागि लैजाने तयारी गरेको थियो । तर, मृतकका परिवारले सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने भन्दै शव उठाउन दिएनन् । ‘खबर नै नगरी शव लैजान खोजिएको थियो’ छोरी रश्मिले भनिन्, ‘बेलैमा अस्पताल नआएको भए घटनालाई ढिसमिस बनाउन सक्थे ।’
मंगलबार वीर अस्पताल अगाडि मृतकका आफन्त र प्रहरीबीच झडप समेत भयो । झडपको क्रममा रश्मिको हात भाँचिएको छ । वीर अस्पतालमै उनको हातको उपचार भएको छ । बुबाको अनुहार हेर्न जाँदा भिडियो किन बनाएको भन्दै प्रहरीले धकेल्दा हात भाँचिएको रश्मिले बताइन् ।
आगामी वर्ष अस्थिरता र अन्योल थपिन्छ : प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे गरे ठीक गरे ठोकुवा गरे ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले गरे चमत्कार ।
तातोपानी नाका वैशाखदेखि पुनः सञ्चालनमा आउदै
कमैया र हलिया प्रथा अन्त्य, अर्बौ सकियो समस्या उस्तै
बागलुङ कालिका मन्दिरमा विवाहमा कडाइ
विद्यालयलाई एकै व्यक्तिले दिए १५ लाख
बलात्कारको अभियोग लागेका वडाध्यक्ष कुमाल थुनामा
नुवाकोटमा ५१ हल गोरु जुधाइँदै , यस्तो छ ऐतिहासिक महत्व